Duqayn Xoogel ayaa ku socota Caawa Viila Somaliya ee Magaalada Muqdisho | maakhir.com
Duqayn Xoogel ayaa ku socota Caawa Viila Somaliya ee Magaalada Muqdisho
January 20, 2008 in Somalia
Muqdisho:- Wararka haatan naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho ee caasimada Dalka Somaliya ayaa waxay sheegayaan inay caawa Hubiyaal lagu weeraray Aqalka Viila Somaliya halkaasi uu haatan ku sugan yahay Raisalwasaaraha Dawlada Somaliya Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cade) waxa la soo sheegay in ciidamo badan halkaasi la soo dhoobay.
Warka aanu ka helayno magaalada Muqdisho ee caasimada Dalka somaliya ayaa waxay intaasi ku darayaan inay Hubiyaashaas Villa Somaliya lagaga soo tuuray dhanka Koonfureed waxaxa waxana agagaarka Qasriga Viila Somalia isku gadaamay Ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo sugaya Amaanka.
khasaaraha ka dhashay hoobiyaashan ayaa illaa iyo hada lagu sheegayaa inuu ku kooban yahay dhaawac Soo gaaray mid kamid ah illaalada Madaxtooyadda. Hase ahaatee waxaan jirin war kasoo baxay dhinaca Dowlada oo looga hadlayo weerarka caawa lala beegsaday Villa Soomaaliya kuwaasi oo daboolka ka qaaday inay wali wadaan Baadhi taano xoogan.
Ciidamada Amissom ee jooga Gudaha caasimada Somaliya ee Muqdisho ayaa goobtaasi Amaankeeda sugaya kuwaasi oo ku gaashaaman gaadiidka Dagaalka, ilaa haatan lama soo sheegin cid ay Dawlada Somaliya Duqayntaasi u qabatay Balse waxa jira Abaabul xoogan oo ay wadaan ciidamadu.
Dhinaca kale maanta ayey magaalada Muqdisho soo gaareen 440 askari oo laga keenay dalka Burundi oo noqday dalkii labaad oo afrikaan ah oo ciidamo kusoo kordhiya Nabad illaaliyaasha AMISOM ee ku sugan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho Ciidamadaasi ka socda Dawlada Burundi ayaa waxa maanta la Dejeyay Xeryo loo qoondeeyay.
Guud ahaan Amaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa mid caawa Cakiran oo ay dhamaan Wadooyinka Joogaan Ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo baadhitaano ku haya Gaadiidka Yar Yar.
« Gudoomiyaha Gobolka Bari ayaa ka hadlay Sicir bararka Baahsan
Gudoomiyii Hore ee Gobolka Sool oo ay Booliska Puntland ku raad joogaan »